‘बीआईएम’ आईटी कम्पनीदेखि बैंकसम्म अवसर
प्लस टु पछिको गन्तव्य–२२
दिनेश गौतम काठमाडाैं, १७ भदाै
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ‘प्लस टुपछिको गन्तव्य’ स्तम्भ शुरू गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । जसअन्तर्गत आज हामीले ब्यचलर अफ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट (BIM) को विषयमा सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो बीआईएम ?
बीआईएम आईटी र व्यवस्थापनको मिक्स कोर्स हो । आईटीको ६० प्रतिशत र व्यवस्थापनको ४० प्रतिशत विषय समावेश गरिएको छ । इन्फर्मेसन सिस्टम, डाटा प्रोसेसिङ, नेटवर्किङ, सफ्टवेयर निर्माण र व्यवस्थापनका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा हो ।
कुनै पनि कम्पनी चलाउन आईटी र व्यवस्थापन दुवैको ज्ञान आवश्यक पर्छ । हार्डवेयर र सफट्वेयर बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई चलाउन दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्छ । त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा बीआईएम हो ।
बीआईएम, बीसीए, सीएसआईटी पढेकाले काम गर्ने क्षेत्र एउटै हो । तर, बीसीए, सीएसआईटी र बीआईएम पढेकालाई आईटी इन्जिनियर भन्न मिल्दैन । इन्जिनियर हुनका लागि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ नै पढ्नुपर्छ ।
यो कस्तो कोर्स हो ?
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत मात्र सञ्चालन गरिएको स्नातक तहको चारवर्षे कोर्स हो । यसमा आठवटा सेमेस्टर छन् । एक सेमेस्टरमा एउटा कलेजमा ६४ जनाको कोटा हुन्छ ।
११ र १२ मा जुनसुकै विषय पढेकाले,
जीपीए २.० वा दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएकाले ।
कुन क्षेत्रमा काम गर्ने ?
सरकारी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा,
अन्य निजी क्षेत्र ।
पढ्नुपर्ने मुख्य विषयहरू
कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम,
चारवर्षे कोर्स पढ्न कम्तिमा ५ लाख खर्च लाग्छ । तर क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाका आधारमा केही फरक हुन्छ ।
विश्वविद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । ६४ जनाको कोटा रहेको कलेजमा चार जनाले छात्रवृत्ति पाउँछन् ।
इन्ट्रान्स परीक्षामा सम्मिलित भएर भर्नाका लागि योग्य भएका चार जना विद्यार्थीले ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउँछन् । छात्रवृत्तिका लागि सरकारी विद्यालयमा पढेको हुनुपर्छ ।
इन्टर्नसिप कम्तिमा दुई महिना गर्नुपर्छ । प्राक्टिकल विषय भएकाले इन्टर्न गर्नैपर्ने हुन्छ । आईटी कम्पनी वा बैंकमा इन्टर्न गर्नुपर्छ । आईटीको विषय धेरै भएकाले आईटी कम्पनीमा इन्टर्न गर्ने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ ।
शंकरदेव क्याम्पस, पुतलीसडक, काठमाडौं
अर्किड इन्टरनेसनल कलेज, गौशाला, काठामाडौं
नेसनल कलेज अफ कम्प्युटर स्टडिज, पक्नाजोल, काठमाडौं
एसियन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नाेलेजी, गोगंबु, काठमाडौं
आईएमएस कलेज, थापाथली, काठमाडौं
नागर्जुना कलेज अफ आईटी, पुल्चोक, ललितपुर
प्राइम कलेज, नयाँ बजार, काठमाडौं
कलेज अफ एप्लाइड बिजनेस, चाबहिल, काठमाडौं
किस्ट कलेज, कमलपोखरी, काठमाडौं
कान्तिपुर कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, पुरानो बानेश्वर, काठामाडौं
थेम्स इन्टरनेसनल कलेज, पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं
नेपाल कमर्स क्याम्पस, मिनभवन, काठमाडौं
सेन्ट जेभियर्स कलेज, माइतीघर, काठमाडौं
मोर्गन इन्टरनेसनल कलेज, बसुन्धरा, काठामाडौं
वीरगन्ज पब्लिक कलेज, पर्सा
जनप्रिय मल्टिपल क्याम्पस, कास्की
गुप्तेश्वर महादेव मल्टिपल क्याम्पस, कास्की
सुर्खेत मोडेल कलेज, सुर्खेत
हेटौंडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, मकवानपुर
कोहलपुर मोडेल कलेज, बाँके ।
यति नै कमाउन सकिन्छ भन्ने हुँदैन । तर, बीआईएम पास भएपछि शुरूमा ३० देखि ५० हजारसम्म कमाउन सकिन्छ । आफ्नो क्षमताका आधारमा लाखौं कमाउन पनि सकिन्छ ।
बीआईएम कोर्स अमेरिकामा पनि रहेकाले नेपाली मास्टर्स लेभलको कोर्स पढ्न अमेरिका पुगेका छन् । त्यस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका देशमा पनि विद्यार्थी पुगेका छन् । बाहिर जाने खर्च भने विद्यार्थी आफैंले बेहोर्नुपर्छ ।
आईटी र व्यवस्थापनको ज्ञान
अनिललाल अमात्य, प्रिन्सिपल, एसियन स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी
कम्पनी चलाउन आईटीको मात्र ज्ञान भएर हुँदैन व्यवस्थापनको पनि ज्ञान चाहिन्छ । जोसँग दुवै ज्ञान हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले चलाएको कम्पनी सफल हुन्छ ।
बैंक, आईटी कम्पनी, संघसंस्था खुल्ने क्रम पनि बढेको छ । ती कम्पनीमा आईटी र व्यवस्थापनको ज्ञान भएका जनशक्तिको माग बढ्दो छ । त्यसैले बीआईएम कोर्स नेपालजस्तो देशमा आवश्यक छ ।
विजय मिश्र, कार्यक्रम संयोजक, अर्किड कलेज
अझै नेपालको ग्रामीण क्षेत्र सूचना प्रविधिमा पछाडि छ । शहरी क्षेत्रमा प्रविधिको विकास भए पनि ग्रामीण क्षेत्र प्रविधिमा बामे सर्दै छ ।
त्यस क्षेत्रमा काम गर्न दक्ष जनशक्तिको माग छ । आईटी र व्यवस्थापनको ज्ञान आवश्यक भएकाले बीआईएमको महत्त्व बढ्दो छ ।
विशालजंग कार्की, (क्यूए) इन्जिनियर, लग प्वाइन्ट नेपाल
विशालजंग कार्कीलाई सानैदेखि आईटी क्षेत्रमा रुचि थियो । तर, उनले ११ र १२ मा म्यानेजमेन्ट पढे । त्यसपछि ब्याचलर लेभलमा के पढ्ने भन्ने विषयको खोजीमा थिए ।
म्यानेजमेन्ट पढेकाले पनि आईटी पढ्न पाइने उनले थाहा पाए । त्यसपछि उनले अर्किडमा बीआईएम पढे । अहिले उनी आईटी कम्पनीमा काम गर्छन् ।
‘बीआईएम पढेकाले इन्जिनियरसँग पनि र म्यानेजमेन्टसँग पनि कुरा गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आईटीसँगै इभेन्ट म्यानेजमेन्ट पनि गरेको छु ।’
त्यस्तै, रामकुमार श्रेष्ठले पनि ११ र १२ मा म्यानेजमेन्ट पढेका थिए । तर, उनको रुचि आईटी क्षेत्रमा थियो । त्यसैले उनले बीआईएम रोजे । म्यानेजमेन्ट पढेकाले पनि बीआईएम पढ्न मिल्ने भएकाले उनको रुचि पूरा भयो । अहिले उनले आईटी कम्पनी नै खोलेका छन् ।
आईटी कम्पनीबाट उनले वेब एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट, इ–कमर्स, डिजिटल मार्केटिङलगायतका काम गर्दै आएका छन् ।
अबको युग सूचना प्रविधिको हो । जुन देशमा सूचना प्रविधिले फड्को मार्छ, त्यो देश आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्छ । नेपाल सरकारले पनि हरेक कार्यालयको कामकाज कम्युटरको माध्यमबाट गर्न शुरू गरिसकेको छ ।
ती कार्यालयहरूका लागि दक्ष आईटी अफिसरको आवश्यकता पर्छ । प्राइभेट कम्पनी, बैंक, सहकारी, संघसंस्था त आईटीबिना चलाउन मुश्किल छ ।
त्यसैले ती क्षेत्रमा चाहिने दक्ष आईटी अफिसर उत्पादन गर्न बीआईएम कोर्सलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
तपाईंका लागि सहयोगी हुन सक्छ, तल उल्लेखित स्टोरी पनि पढ्नुहोस् :
प्रकाशित मिति: मंगलबार, १७ भदौ २०७६, २२:२७:००
विज्ञ भन्छन् : कोरोना जोखिम बढ्यो, कर्फ्यू लगाऊ
खोज पत्रकारिताका पर्याय गाउँले
ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा छलफल चल्दै, खनाल र नेम्वाङ पनि सहभागी